Lakkoofsa sadarkaalee matadureewwanii, kasaa keessatti dabaluuf, saagi.
Ardaa kana, oddeefannoo isa kam akka kasaa keessatti dabalattu ifteessuuf fayyadami.
Kasaa isa sadarkkaalee toorii fayyadamu uuma.kana jechuunis, keewwatoota akkaataalee mataduree durmurtaawaa keessaa isa tokkoon dhaangeffaman (Mataduree 1-10) kasaatti idaa'amu.
Sadarkaalee toorii fuula caancala qaaqa Toorii fi LakkaawwiiDhangi'i - Keewwata irraayis moggaasuu dandeessa.
Akkaataawwan keewwataa isa ati qaaqa Akkaataawwan Ramadi keessatti akka galfatoota kasaatti ifteessitu itti dabala.Akkaataawwan keewwataa isa kasaa keessatti dabaluu barbaaddu filachuuf, qabduu Akkaataawwan Ramadi (...), isa mirga saanduqa kanaatti argamu cuqaasi.
Qaaqa, Akkaataawwan Ramadi jedhu,bakka ati kasaatti akkaataalee keewwataa ramaduu dandeessu siif bana.
Galfatootaa kasaa isa ati Saagi - Kasaalee fi Gabateewwan - Galfata filuun saagde sana kasaa keessatti dabala.